Mikatso ny fizotry ny fandriampahalemana ao Kolombia ary mitombo ny famonoana ireo mpikatroka ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Kati Hinman, Laura Vidal Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Miranah
Voadika ny 28 Septambra 2018 5:18 GMT
Sary tamin'ny lahatsary “No están Solos” (Tsy irery ianao) mampiseho ny fihetsiketsehana ho fiarovana ireo mpikatroka ara-tsosialy ao Kolombia. Horonantsary sy sary nozarain'ny Contagio Radio, onjam-peo tsy miankina ao Kolombia izay natokana ho an'ny zon'olombelona.
Nihevitra i Kolombia, iray amin'ireo firenena mampidi-doza indrindra ho an'ny mpikatroka ny zon'olombelona fa afaka tamin'ny ady mitam-piadiana 50 taona tamin'ny alalan'ny dingana fandriampahalemana sarotra izay nanomboka tamin'ny taona 2012. Satria tsy mivoatra ny dingana ho amin'ny fandriampahalemana – kendrena amin'ny fomba mampatahotra ireo mpikatroka ara-tsosialy, mpitarika vondrom-piarahamonina, mpiaro ny zo hanan-tany, mpiaro ny zo mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy sy ny firaisana ara-nofo, mpampianatra, mpanao gazety – ary miha-mitombo ny isan'ny maty.
Tsy rototra loatra ny governemantan'ny filoha voafidy vao haingana Ivan Duque manoloana ireo vono olona ary vitany hatramin'ny nandà ny fiverimberenan'ny herisetra, izay mahatonga ny raharaha ho sarotra araha-maso.
Tamin'ny antonta-taratasin'ny gazety El Tiempo, mampiseho ireo faritra marefo izay tena hisian'ny ady mitam-piadiana indrindra ny sarintanin'ny vono olona. Tamin'ny taona 2018 monja, mpikatroka ara-tsosialy 124 no maty voaisan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Indepaz ( “Ivon-toerana ho amin'ny Fandriampahalemana sy Fampandrosoana”), ary tokony ho 300 tamin'ireo mpikatroka ireo no efa niasa nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fifanarahana ho an'ny fandriampahalemana tamin'ny taona 2012.
Tsy misy tany, tsy misy fandriampahalemana
Vokatry ny fizarazarana ny tany tsy mitovy tanteraka ny ady lalim-paka eo amin'ny zo hanan-tany ao Kolombia. Ny herisetra maharitra sy mitohy no mahatonga ny fahasarotan'ny fifanarahana momba ny fandriampahalemana sarotra ampiharina mba hiarovana ny zo momba ny fananan-tany.
Nanaiky tsy hanao hetsika sy hanolotra ny fitaovam-piadiany ny Tafika Mitam-piadiana Revolisionera ao Kolombia (FARC), ny tena mpikomy, saingy nahatonga fahabangana fahefana izany izay ahitana ireo mpikambana sasany nandao ny FARC ka mbola mavitrika hatrany ho mpiady anaty akata. Mety misy ireo atosiky ny antony ara-toekarena, ny hafa kosa mihemotra noho ny fiainana sivily tsy azo antoka. Raha ny marina, maro tamin'ireo mpikambana FARC no lasibatra sy novonoina nandritra ny fiezahan'izy ireo hiverina indray eo anivon'ny fiarahamonina. Miezaka mampitombo ny fanaraha-mason'izy ireo ny faritany ao amin'ny faritra mimandan'ny FARC teo aloha ny Vondrona mitam-piadiana miafina hafa, indrindra ny Fiarovan-tena miray ao Kolombia (AUC).
Mihevitra tanteraka ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena fa ireo fikambanana orinasa no mety ho anton'ny vono olona, ​​fa tsy ireo vondrona mitam-piadiana miafina ihany. Mahatonga ireo mpikatroka ara-tsosialy ho matahotra ny amin'ny fiarovana azy ireo ny tetikasan'ny filoha Duque hanohy hampandroso ny toekarena fitrandrahana kanefa ireo tany ifandirana no tena mahaliana ireo orinasa lehibe iraisampirenena.
Tamin'ny Desambra 2017, nankany amin'ny Kaongresy miaraka amin'ny tarehy misaron-tava fotsy ireo mpitarika eo an-toerana Bajo Atrato, faritra avaratr'i Kolombia ao anatin'ny herisetra, taorian'ny namonoana ny mpitarika roa an'izy ireo teo am-piarovana ny tanin'izy ireo manoloana ireo mpampiasa vola amin'ny fambolena menaka voanio sy akondro:
Fianakavian'ireo mpitarika novonoina tao amin'ny faritra izahay, ary norahonana ho faty avokoa ao anatin'ny paikady apetrak'ireo mpandraharaha efa voampanga tamin'ny raharaham-pitsarana isan-karazany sy mpandraharaha izay efa voaheloka. Mandra-pahoviana no [hifaranan'izao] ary firy indray no ho [ho faty]?
“Mitranga eo anoloan'ny masonay izany rehetra izany …”
Namokatra ny “Vao avy nandre izany aho” (Me acabo de enterar) ny La Pulla, fantsona YouTube natokana ho an'ny hevitra mba hanazava ny teny manodidina ireo vonoan'olona ireo miaraka amin'ny vazivaziny ratsy mahazatra. Nofaritana ho olona “nitaky zavatra fototra kely: tany ambolena, sekoly, toeram-pitsaboana, rano, lalana … Ary ny fandriampahalemana …” ireo mpikatroka ara-tsosialy maty novonoina.
Manohy ilay mpanolotra hoe:
Ireo olona ireo no vato ao anatin'ny kiraro manelingelina ny tombontsoan'ireo vondrona mitam-piadiana, amin'ny fifehezana ny faritany, ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany tsy ara-dalàna sy ny lalan'ny zava-mahadomelina. Ary tsy kely ny voka-dratsy; rehefa mamono mpitarika ara-tsosialy izy ireo, dia mamono ny mety ho fiovana eo amin'ny fiaraha-monina, satria ireo tetikasa tarihin'io olona mpitarika io dia tsy ho tanteraka mihitsy ary matahotra ny hanohy ny olona. Matetika miala izy ireo noho ny fahatahorana ho faty, na satria efa nahazo fandrahonana izy ireo. Mazava tsara ny hafatra. Araka izany dia fongana daholo ny mpanohitra ary tsy miova ny zava-drehetra, ireo izay sahirana dia mbola sahirana hatrany, ary ireo tompon'ny ady no tompon'ny zava-drehetra. Mitranga eo imasontsika izany rehetra izany, raha manome tsiny antsika ny governemanta ary sahy milaza mihitsy fa mpanao heloka bevava ny sasany amin'ireo lasibatra.
Miahiahy ihany koa ny mopera Alberto Franco, ao amin'ny Komity Ekiomenika ho an'ny Rariny sy ny Fandriampahalemana (Comisión Justicia y Paz Intereclesial), ary nilaza fa ny Filoha Duque
no solontenan'ny vondrona izay ara-tantara, nanohitra ny fizotry ny fandriampahalemana, ny famerenana ny tany sy ny fanavaozana ny demokrasia Kolombiana.
Tamin'ny volana Jolay 2018, Kolombiana an'arivony no nidina an-dalambe mba haneho ny firaisankinany amin'ireo mpikatroka ara-tsosialy sy ireo mpiaro ny zon'olombelona, ​​manaiky fa ilaina ny manohitra mafy ny vono olona tsy ara-dalàna.
Azo arahana amin'ny tenirohy #NosEstánMatando (#Vonoin'izy ireo izahay) sy ny #NoEstánSolos (“Tsy irery ianao) ny ankamaroan'ny hetsika ataon'izy ireo, fanangonan-tsonia, fandihadiana, sy ireo vaovao, mitady ho tenirohy malaza ao amin'ny Twitter ireo, ary natokana hiampangana ireo vono olona sy hitantarana ny tantaran'ireo niharam-boina mba hahatsiarovana azy ireo sy ny asa mafy nataoni'izy ireo.